Akụkọ-Mgbakọ nchịkọta mmalite nke etiti 2019, ngosipụta mmụọ otu & anụ ọkụ ọkụ DIY
Nchịkọta ngwụcha ngwụcha afọ 2019, ngosipụta mmụọ otu na anụ ọkụkụ DIY
Na Julaị 6, 2019, ọkọlọtọ dị n'ogige Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. bụ egwu gbara okirikiri gbara gburugburu, na-akpọ aha otu n'otu, yana “2019 Xinyang Electronics Mid-Year End Kick-off Meeting” ọkọlọtọ, rịbọn na balloons. dị elu n'ọnụ ụlọ ọgbakọ nke ụlọ ọrụ. Ekike ahụ bụ ememme pụrụ iche, ndị Xinyang wepụtara usoro nchịkọta nke afọ etiti afọ. N'elekere 13:30 nke ụtụtụ, nzukọ nchịkwa bidoro n'okpuru nduzi nke "Abụ nke Xinyang". Onye isi ngalaba ọ bụla na onye nlekọta ogbako n'otu n'otu chịkọtara ọrụ na ọkara mbụ nke afọ wee nyochaa nsogbu nke ngalaba ahụ. Emebere atụmatụ ọrụ nke ọkara nke abụọ nke 2019. Onye isi njikwa Jiang Shiliang gere ntị Mgbe emechara akụkọ ọrụ ndị ọrụ niile, enyere ngalaba nke ọ bụla ezigbo nkọwa, wee tinye ọrụ ọrụ maka ọkara nke abụọ nke afọ dabere na ọnọdụ ahịa dị ugbu a. A na -etokwa ogbako a gbagọrọ agbagọ, ngalaba akụrụngwa, ogbako ọgbakọ, ngalaba mmepụta na ngalaba na -ahụ maka njikwa mma. Enwetara nkwenye nke atụmatụ ọrụ nke otu a nke ọma, anyị na -ekelekwa ha maka nrara ha raara ha wee nweta ebumnuche Xinyang. N'ime ọrụ anyị na -arụ kwa ụbọchị, enwere ọtụtụ ohere maka ndozi na usoro njikwa anyị yana nsonaazụ ọrụ. Anyị ga-eji uru nke anyị na ike otu anyị mee njem maka Xinyang iji mezuo nrọ Xinyang narị afọ gara aga. Ndị Xinyang ga -ahapụrịrị ọnọdụ ọnọdụ ọrụ ha dị mma, jikọta mgbanwe dị na gburugburu ahịa, zụlite ụdị ọrụ anụ ọhịa wolf, wee rụpụta ngwaahịa ọhụrụ na ndabere nke ịhụ na ngwaahịa ndị mbụ dị, wee jiri obi ike pụọ ka ijide nnukwu ahịa. ịkekọrịta. Ka emechara okwu n'ozuzu, ndị njikwa niile na -a swearụ iyi na anyị ga -emerịrị ihe iji metụta ndị gbara anyị gburugburu, na -ebute ihe atụ, na -agbagha onwe anyị, na -aga n'ihu na -amụta, na -emetụta ndị ọzọ, ghara ịgha ụgha, zere ihe ziri ezi na ihe na -adịghị mma, ghara ịdị na -enwe afọ ojuju, gbalịsie ike maka ọnọdụ mbụ, wee bụrụ ndị Xinyang ruru eru. Na -achụso ịdị mma, na -akawanye mma, na -aga n'ihu na -emepụta ihe ọhụrụ, mepee ahịa, ma na -egbo mkpa ndị ahịa mgbe niile. Dị ka ndị Xinyang, anyị ga -aghọta echiche azụmaahịa Maazi Jiang ma soro usoro mmepe Xinyang. Ọ bụghị naanị na Xinyang na -enye anyị ikpo okwu iji kpata ego, kamakwa ọ na -akụziri anyị ezi nzube nke ndụ. Anyị na -ekele usoro ikpo okwu Xinyang ma kelee gị maka ịrụsi ọrụ ike gị.
N'elekere 16:30, ndị otu nọ n'alaka ụlọ ọrụ ahụ dị mma ma dịkwa n'usoro. Anyanwụ na -ekpo ọkụ n'oge ọkọchị kwesịrị ịcha ala, mana mmụọ, mmụọ na mmụọ nke ndị Xinyang agbanwere maka obere igwe ojii na -acha anụnụ anụnụ iji kpuchie anyanwụ, ikuku ikuku wee jiri nwayọ na -agbakwunye na ngosipụta mmụọ nke otu ahụ. Site n'ikuku dị mma, taa ngosipụta mmụọ anyị na -egosipụta ọmarịcha ụlọ ọrụ nke ezinụlọ Xinyang, ụlọ akwụkwọ na ndị agha. Ndị otu anyị ga-etinyerịrị ntọala siri ike maka Xinyang narị afọ. Enwere m olile anya na anyị ga -edobe ịdị n'otu na ụdị ọrụ ike anyị gosipụtara taa n'ọrụ anyị kwa ụbọchị. Ịdị n'otu ahụ na -egosipụta ịdị n'otu nke ihe ọmụma na omume nke ndị Xinyang. N'ikpeazụ, a na -egosikwa nsonaazụ onye ọ bụla nọ na ngosipụta dị ebube. Anyị Xinyang Ngwa mmepụta akara akara winding omumuihe, akụrụngwa omumuihe, ogbako agịga na ngalaba nyocha ihe dị mma meriri nke atọ. Ihe mejupụtara ya na ebe a na -emegharị windo arụpụtala ezigbo ihe na mmepụta kwa ụbọchị. Ịme agịga na -arụkwa ọrụ nke ọma dị ka kpakpando na -ebili iji nweta mmụba okpukpu abụọ nke ịdị mma na ịre ahịa, Ngalaba Ogo na -ejikwa ịdị mma nke ọma iji hụ na ngwaahịa Xinyang na -aga n'ihu. Otu nkeji na ogbo na afọ iri nke ọrụ. Mgbe arụchara ọrụ siri ike, ha na -arụsi ọrụ ike na -arụ ọrụ nke ọma n'otu ụlọ, yabụ na ha enwetala ezigbo nsonaazụ. Anyị ga -amụta ihe site na ezigbo ndị otu, ma n'otu oge ahụ, hapụ àgwà ọjọọ n'ọrụ ụbọchị ọ bụla ma nye uru nke anyị uru zuru oke. Ebumnuche azụmahịa.
Mmechi nke ọrụ ahụ bidoro na anụ abeụ mmanya na -atọ ụtọ. Ọkụ na -enwu ọkụ dị ka ebum n'uche mbụ anyị ịlụ ọgụ maka nrọ anyị na arụmọrụ azụmaahịa na -aga nke ọma nke Xinyang. Gọzie Xinyang. Ndị otu ezinụlọ Xinyang dị n'otu n'echiche na site na nzọụkwụ. N'ime ọrụ ọdịnihu, anyị ga-eji uru nke aka anyị rụsie ọrụ ike maka nrọ narị afọ Xinyang ma hụ na emechara ebumnuche azụmahịa 2019.
Oge ezipụ: Jul-07-2019